We Fight We Win. -- " More than Media ": ကိုမိုးသီး ( ၂၈-၈-၈၈) ဗကသ ညီလာခံ
ကိုမိုးသီး ( ၂၈-၈-၈၈) ဗကသ ညီလာခံ
ဒီဓါတ်ပုံ တွေ ကို မနေ့ က ဦးပြေသိမ်းဆီက ရပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုဖုန်းမော်နေ့ ပြီးနောက်တနေ့ ။ သူကဒီဓါတ်ပုံကို သိမ်းထားတာ ၂၃ နစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ ပုံက
၂၈-၈-၈၈ နေ့ သမဂ အဆောက်ဦးဟောင်း မျက်ခင်းပြင်မှာလုပ်တဲ့ ကျောင်းသားသမဂကို ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းတဲ့အခန်းအနားပါ။
မြန်မာ တွေ ကိုယ့်အချင်းချင်း သတ်နေ
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် က ငါတို့ အားလုံးကို ဖင်ချသွားပြီ
Chat Gyi said...
anybody see KO MYA AYE? haaa haa
Blaming each other,stealing country's wealth, pressuring to same nationalities, busy with those nonsenses, while somebody, Some outsiders are searching on to take advantages. Because of those nonsenses, now that Bangladesh country simply gain water territory for themselves. Hallo, MYANMAR Government, WAKE UP, WAKE UP !!!!.